‘रुद्र’मा निखिलको एक्सन अवतार, सारा र विश्वको प्रेममा भिलेन किन ? | Radio Langtang 90.3 Mhz
‘रुद्र’मा निखिलको एक्सन अवतार, सारा र विश्वको प्रेममा भिलेन किन ?
नायक निखिल उप्रेतीलाई खलपात्रको भूमिकामा देखाइएको चलचित्र ‘रुद्र’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एक्सन प्रधान चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो । चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा नायक निखिल उप्रेती, नव-कलाकारद्धय विश्व शर्मा र साराको उपस्थित थियो ।
रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई निखिल उप्रेती प्रोडक्शनको ब्यानर र विश्व प्रोडक्शनले मिलेर बनाएका हुन् । रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, बनिष शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन, सौरभ लामाको छायांकन रहेको यो चलचित्रमा निखिल उप्रेती, विश्व शर्मा, सारा, रोय दीप, ध्रुव कोइराला, ज्याक श्रेष्ठ, भाष्कर ओली, अनिल पाण्डे लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चलचित्रको ट्रेलरमा एक्सनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । निखिल उप्रेतीको एक्सनमा विविधता देखिएको छ । धेरै दर्शकलाई ट्रेलर हेर्दा साउथ फिल्मको झल्को पनि आउँछ । साउन १३ गतेबाट यो चलचित्र रिलिज हुँदैछ ।
चुनाव बहिस्कारको आन्दोलन जारी राख्ने राजपाको निर्णय
सिके लालको भाषणः देउवा, ओली र प्रचण्ड अकबर हुन्, वीरबल खोई ?
नयाँ डिस्कोर्सः दोस्रो चरणको चुनाव प्रचण्डकै नेतृत्वमा !
पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा खटाउन थालेको छ । सिंहदरबारमा चाहिँ सत्ता हस्तान्तरणको ...
सुस्ताबासीले भारतीय सीमाको बाँध ‘भत्काए’
पश्चिम गण्डक नहरका कारण डुबानमा परेको भन्दै सुस्ताबासीले भारततर्फ जाने नहरको बाँध भत्काएका छन् । यद्यपि स्थानीय प्रशासनले स्थानयबासीलाई मनाउने ...
भूकम्पका कारण विस्थापित स्याफ्रुस्थित कोमिन स्यामेवाङफेल माविको नयाँ भवन निर्माण
भूकम्पका कारण विस्थापित भएको रसुवाको स्याफ्रुस्थित कोमिन स्यामेवाङफेल माविको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। भूकम्पले पहिरो झरेपछि विद्यालय विस्थापित हुन पुगेको थियो। स्याफ्रुबेशीबाट विस्थापित भएको विद्यालय ...